Nezvedu - Wuxi CRE Nyowani Energy Technology Co, Ltd.
Simba Kuchengetedza / Pulse Capacitor
Simba Shanduri Capacitor
Simba Rinotakura Vatapi
Induction kupisa capacitors
Mining simba inverter
Wuxi CRE New Energy Technology Co, Ltd piyona mukugadzira, kuvandudza uye
kugadzira mafirimu capacitors muChina. Tinodada nekugona
yakatsaurwa dhizaini uye timu yekuvandudza.
Chiratidzo uye Chirevo paMishini
Iko kukosha kwekambani kwakatomisikidzwa mune yayo yekutanga (CRE) inomiririra Kupa, Kusimbisa uye Kunaka.
Chiono chedu ndechekupa zvigadziriso zvitsva munharaunda yepasi rose kuti zvibatane pamwe zvisingadzivisike uye zvakashata zveramangwana zvemagetsi zvemagetsi.
Basa redu nderokuva mumwe wevanonyanya kuzivikanwa capacitor vatengesi vese vekunze uye vekunze.
Zvigadzirwa uye Maitiro
CRE yave iri mutengesi wepasi rose wesimbi yakagadziriswa mafirimu capacitors kubvira 2011, ichiendesa yakavimbika uye inyanzvi mhinduro dzemagetsi zvemagetsi; kufambisa mune dzakasiyana siyana kusanganisa maindasitiri otomatiki uye simba rekuchengetedza-magetsi, magetsi emagetsi, kufambisa njanji, mota yemagetsi uye simba rinogadzirika. Yakavimbika, yemhando uye yakagadziriswa capacitor mhinduro yakagadzirirwa vatengi vedu yakagara iri yekutanga kukosha kwedu.
Yakasiyana siyana capacitor zvigadzirwa zvinopihwa PV / mhepo simba inverter, migodhi inoshandura, njanji traction simba system, EPS, UPS, APF, SVG, magetsi akasarudzika emagetsi magetsi, hutongi hwemasimba / kufambisa, inofambiswa system, E-mota etc. Ivo anonyanya kunyorerwa DC-Link, IGBT snubber, yakakwira-voltage resonance, coupling uye AC kusefa.
Parizvino, CRE ine anopfuura makumi maviri emapaunzi uye anotenderwa neMhando Management System ISO9001 uye TS16949 uye UL yekuchengetedza sangano.
Vatengi, vanobatidzana uye iro ramangwana
Kwete chete iyo kambani yakashandira vatengi mudzimba, asi CRE yave ichigadzira zvigadzirwa zvemakambani pasi rese.
Muna 2016, CRE yakasaina chibvumirano chekuita mushandirapamwe neDKE, Gavhuna weGerman Commission yeMagetsi, Elekodhi & Ruzivo Technologies yeDIN neVDE. ERC yemagetsi magetsi yakavambwa kuitira R & D zvinangwa.
Wuxi CRE Nyowani Nyowani inotarisira kubatana nevamwe vakawanda vane hunyanzvi pasi rese. Pamwe chete, isu tichazotungamira zvimwe zvinoshandiswa zvemafirimu capacitors mumagetsi emagetsi munda, tipe mukusimudzira kwesimba-inoshamwaridzana simba nyowani uye zvirinani kushandira vatengi vedu pasi rese.
Iyo Patent Nyowani yeMining-Inoenderana neCapacitor ...
Kero: Kuvaka D, N.789 NanHu Avenue, Liangxi District, Wuxi Guta, Jiangsu Province, China 214000